गीत गाउन नमान्दा स्टेजमै गायिकाको गोलि हानि हत्या
पाकिस्तानमा एक नायिका/गायिका को गोलि प्रहार गरि हत्या भएको छ । निजी पार्टीमा गीत गाउन अस्विकार गरेपछि उनि माथि गोलि चलाईएको थियो । प्रहरीले बताएअनुसार हमलाकारीहरु २५ वर्षीया गायिका सुम्बुल खानको मरदानस्थित घरभित्र छिरेर उनलाई अपहरण गरेर पार्टीमा उनको प्रस्तुती हेर्न चाहन्थे। तर गायिका खानले अपहरणको प्रतिकार गर्दा बन्दुकधारीले गोली चलाएका थिए। घटनास्थलमै गायिकाको ज्यान गएको पाकिस्तानी मिडियाले उल्लेख गरेका …
यस्तो छ , अहिले बजारमा भित्रिएको प्लाष्टिकको चामल पहिचान गर्ने ४ सरल तरिका
आजभोली प्लाष्टिकको चामल आईरहेको कुरा हामीले जताततै सुनिरहेका हुन्छौँ । नक्कली चामलको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि निकै नै हानिकारक छ । यसले प्रजनन प्रणालीमा बाधा पुर्याउनुको साथै पेटसम्बन्धि विभिन्न समस्याहरु निम्त्याउँछ । त्यसैले तपाईंले प्लाष्टिकको चामलबारे थाहा पाउन निकै नै जरुरी छ । आज हामी तपाईंलाई यसैबारेमा जानकारी दिन्छौं । तपाईंले प्लाष्टिकको चामल हो वा होइन सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ । यसको …
यी ४ राशी हुने मानिसहरुसँग हुन्छ यस्तो अनौठो क्षमता, थाहा पाईराख्नुस् !
ज्योतिष शास्त्र भन्छ, तपाई हाम्रो राशीअनुसार जीवन चल्ने गर्दछ। व्यक्ति अनुसार गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव तपाईमा कस्तो परेको त्यो कुरा राशिले बताउने गर्छ। तर यी सबैको इतर ज्यातिषी विद्याको एक अर्को खास विशेषता छ । जसअन्तर्गत तपाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राशिको माध्यमबाट पनि चिन्न सक्नुहुनेछ । अर्थात राशिको अन्तर्यमा एक खास खुवी हुन्छ, जुन व्यक्तिको जस्तो राशि हुन्छ …
जब सलमान खानलाई हेर्न दर्शकको भिडले थाम्न सकेन…(भिडियोसहित)
बलिवुड सुपर स्टार सलमान खानको हिन्दि सिने जगतमा एक छुट्टै पहिचान रहेको छ। उमेरले पचास काटेका सलमान अझै अविवाहित नै छन्, बक्स अफिसमा थुप्रै रेकर्ड राखेका सलमानको हरेक फिल्म सुपर हिट हुनेगरेको हामि सबैलाई थाछा नै छ ! केहि महिना पछि दवंग टिम नेपाल आउने हल्लाले उनका नेपाली फ्यानहरु उत्साहित छ नै ! तर, यो दृश्य भने भारतको पुनेको हो, …
‘दान गर्नेले नि:शुल्क दिएको रगत बिरामीले पनि नि:शुल्क पाउनुपर्छ’ गगन थापा
पूर्व स्वाथ्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले विरामीले निःशुल्क रुपमा रगत पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। बनेपामा आयोजित रक्तदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले दान गर्नेले निःशुल्क रुपमा गरेको हुँदा पाउनेले पनि निःशुल्क रुपमा पाउने व्यवस्था गनुपर्ने बताए। त्यसका लागि रगत सुरक्षित गर्ने, गुणस्तर र व्यवस्थित गर्ने काममा लाग्ने खर्चका लागि रेडक्रस र मन्त्रालयले विकल्प खोज्नुपर्ने उनले सुझाव दिए …
पत्थरी भएकाहरुले ब्यक्तिहरुले खान नहुने र खाँदा फाइदा हुने खानाहरु, एकपटक (पुरा पढ्नुहोस्)
मिर्गौलामा हुने पत्थरी स्टोन लाई मेडिकल भाषामा रेनल क्याल्कुलाई भनिन्छ। हिजोआज जीवनशैली र खानपानका कारण मिर्गौलामा पत्थरी हुनेको संख्या बढ्दो छ। पत्थरी विभिन्न कसिमका हुन्छन् र यो विभिन्न कारणले हुने गर्छ। खान नहुने १ पालुङ्गो साग २ टमाटर ३ अमला ४ काजु ५ काँक्रो ६ काउली ७ फर्सी ८ च्याउ ९ भण्टा खान हनुे १ नरीवलको पानी २ मकै ३ …
होसियार ! तपाईलाई पनि छालाको रोग छ कि, उपचारमा नगर्नुस् ढिला हुन सक्छ क्यान्सर
चिटिक्क र राम्रो देखिन जो कोहीलाई मन लाग्नु स्वाभाविकै हो । सुन्दर र आकर्षक व्यक्तित्व भएको मानिसमा सबैको ध्यान जान्छ । सौन्दर्यका पारखीहरु खासगरी त्वचा अर्थात छालाको हेरचाहमा बढी सजग देखिन्छन् र यसले व्यक्तिको आकर्षक छविलाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ । छालाको रङ कस्तो छ भन्नेमा भन्दा पनि कसरी उसले आफ्नो छालाको हेरचाह गरेको छ भन्ने कुराले अधिक अर्थ राख्ने …
‘मुन्नी’ की अनस्क्रिन आमा वास्तविक जीवनमा देखिन्छिन यस्ती ग्ल्यामर
सन् २०१५ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘बजरंगी भाईजान’ ले बक्स अफिसको रेकर्ड तोडेको थियो। फिल्ममा जति अभिनेता सलमान खानलाई रुचाएको थियो। त्यति नै हर्षाली मल्होत्रा अर्थात् मुन्नीको क्यारेक्टरलाई पनि सबैले मन पराएका थिए।त्यसपछि मुन्नीको आमाको भूमिकालाई पनि रुचाएको थियो। जुन भूमिका अभिनेत्री मेहर बिजले निभाएको थियो। स्क्रिनमा जति सुकै सिम्पल साधारण देखिन्छन। वास्तविक जीवनमा उनि एकदम हट र ग्ल्यामर देखिन्छिन। …
बलिउड आमा/बुवा सुपरस्टार, छोराछोरी बेरोजगार
आमा/बुवा नै सुपरस्टार भएपछि छोराछोरीले त्यो भन्दा अग्लो फड्को मार्नुपर्ने हो । तर, मानविय जीवनमा यो सर्त लागु हुँदैन । पिता, पूर्खाको विरासत पाउन त सजिलो छ, तर थेग्न चाहि गाह्रो । नपत्याए, यी बलिउड सुपरस्टारका छोराछोरीलाई हेरे पुग्छ । बलिउड स्टार किड्स कसरी यसको अपवाद हुनसक्थे । यदि त्यसो हुँदो हो त, धमेन्द्रकी छोरी इशा देओलले धुम मच्याउनुपर्ने हो …
आमिर खानले ट्विट गर्दै अमिताभ, सलमान र शाहरुखलाई दिए यस्तो चुनौती!
लिउडका चर्चित अभिनेता आमिर खानले महानायक अमिताभ बच्चन, सलमान खान र शाहरुख खानलाई ट्विटमार्फत खुलेआम चुनैती दिएका छन्। आमिरले एउटा फोटो सेयर गरेका छन् जसमा उनको हातमा प्याड रहेको छ जुन महिलाहरुले प्रयोग गर्छन। आमिरले ट्विटमा यस्तो लेखेका छन्, ‘हो मेरो हातमा प्याड छ र प्राकृतिक चिज भएकोले यसमा केहि लाजमर्दो कुरा छैन। यो प्याडम्यानको चुनौती हो। तपाई पनि आफ्नो …
अनमोल ,पल र प्रदीपको क्रेज बढ्दो, यी तीन मध्ये कसको फ्यान धेरै ?
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विगत केहि वर्ष देखि पल शाह, अनमोल केसी र प्रदीप खड्का अभिनेताको क्रेज बढ्दो छ ।उनीहरुलाई एकअर्काको प्रतिष्पर्धीको रुपमा लिइ्रन्छ। पल, अनमोल र प्रदीप तीनै जनाको आफ्नै फ्यान फलोईङ छन् । उनीहरुको चलचित्र रिलिज हुँदा हलहरुमा थामि नसक्नु भिड जम्मा हुन्छ । तीनै जना चक्लेटी अनुहारका छन् । तीनै जनाको लेडिज फ्यान फलोईङ धेरै छ । उनीहरुका …
यी हुन् ६ महिनासम्म लगातार सुत्ने सुन्दर युवती, यस्तो थियो कारण
हामीले पुराणमा पढेका छौ जहाँ कुम्भकर्ण एकपटक सुतेपछि ६ महिनापछि मात्रै उठ्थे । एक यस्तै युवती रहेकी छिन् जसलाई कलियुगको कुम्भकर्ण भनिन्छ । ब्रिटेनमा बस्दै आइरहेकी यी युवतीलाई स्लीपिङ ब्युटी भनेर बोलाउने गर्छन् । यसको कारण निन्द्रा नै हो । यी युवती एकपटक सुतेपछि धेरै महिनासम्म सुतिनै रहन्छिन् । स्टोकपोर्टकी १६ वर्षीय बेथ गुडियर जब एक पटक गहिरो निन्द्रामा सुत्छिन्, …
काठमाडौँ । निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ अहिलेको साङ्गितिक बजार, दिनहुँ सयौं को संख्यामा गीतहरु बजारमा आइरहेका छन , ती मध्य केही ले स्थान पाउँछन् भने केही हराएर जान्छन । नेपाली गीत सङ्गीत चाहे त्यो आधुनिक होस, दोहोरी होस, पप होस या अन्य आफ्नै लय अनि पहिचानमा अगाडि बढिरहेका छन । तर अहिलेको बजार अनि पुस्ता ले पक्कै पनि केहि नयाँ अनि …
सामान्यतया अचार खान बाहेक यसको अरु कुनै उपयोग हामी त्यति गर्दैनौं । तर पुदिनाको प्रयोगले मानव स्वास्थमा धेरै भन्दा धेरै फाइदा गर्दछ । (पतेना) पुदिनाको प्रयोगबाट हुने कही फाइदाहरुः मुहारमा आउने डण्डिफोर र खिलबाट छुटकाराः पुदिनाको पातहरु सँगै ३ थोपा जती कागतीको रस मिलाएर मुहारमा लगाउने र पाँच मिनेट पछि यसलाई सफा गर्नु पर्दछ । एक हप्ता सम्म निरन्तर यसको …
यस्ता ७ व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुहोस् अनार
फलफुल खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिन्छ। तर केहि फलफुल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो हुन्छ। अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। तर यी ७ व्यक्तिले अनारले खानु राम्रो हुदैन। स्वस्थ्यमा सुधार आउनुको साटो झन् बिग्रिन सक्छ। १, तौल घटाउन चाहने व्यक्ति यदि तपाई आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने अनार नखानुहोस्। अनार खादा तौल घट्नुको साटो बढ्न थाल्छ। २, प्रेसर लो …
Page6of 427« First...45678»102030...Last »